How to Unicode rendering in ​ေ on iOS keyboard project. - MYSTERY ZILLION
How to Unicode rendering in ​ေ on iOS keyboard project.
August 2016 in iOS Devlopment
ကျနော် iOS အတွက် မွန်တိုင်းရင်းသား ယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်တစ်ခုကို Swift2.2 နဲ့စမ်းလုပ်နေပါတယ်။ အခက်တွေ့နေတာက ​ေ မှာပါ။ ​ေ ကို အရင်ရိုက်လည်း ​ေက ဘဲပေါ်တယ်။ အနောက်မှာရိုက်လည်း ​ကေပေါ်ပါတယ်။ ​ေ ကိုအရင်ရိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လို code မျိုးနဲ့ rendering လုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာကိုသိချင်လို့ပါ။ ဒီက open source ဖြစ်တဲ့ tasty-imitation-keyboard https://github.com/polishedcode/tasty-imitation-keyboard ရဲ့ QWERTY ဆိုတဲ့ json မှာ မွန်အက္ခရာတွေကိုထည့်ထားပါတယ်။> ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Unicode keyboard က rendering logic တွေကို keyboard မှာထည့်ရေးရပါတယ်။
စာလုံးတွေကို နေရာ ပြန်ရွှေ့ပေးဖို့လိုတယ်။
Unicode သမားတွေ ပြောသလို စာရေးသည့် အတိုင်း keyboard မှာ ရိုက်လို့ ရတယ် ဆိုတာ က keyboard မှာ logic တွေထည့်ထားလို့ပါ။ Unicode ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။
ဗမာ စာမှာတော့ သဝေထိုး ကို နေရာရွှေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ --်--့ ကို နေရာ ရွှေ့ရပါတယ်။
rendering logic တွေကို ဘယ်လိုရေးရမလဲအကို ? Tutorial Link တွေရှိလျှၚ် ပြောပြပေးပါနော်။